टानको रकम नेतृत्वले अपचलन गर्न खोज्यो | tour Khabar
टानको रकम नेतृत्वले अपचलन गर्न खोज्यो
नेतृत्वले विधि प्रक्रिया नमान्दा विवाद बाहिर आएको हो
पर्यटन क्षेत्रको एक खम्बा ट्रेकिङ व्यवसायीहरुको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) यतिबेला आर्थिक विवादका कारण चर्चामा छ । बैंकको खाता सञ्चालनका विषयमा टान नेतृत्व र कोषाध्यक्षबीच सुरु भएको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ ।
टानको बहुमत कार्यसमिति र नेतृत्वले कोषाध्यक्ष लिलाबल्लभ दाहालले अत्यावश्यक कामका लागि छुट्याइएको रकमको चेकमा हस्ताक्षर नगरेको आरोप लगाएको छ भने कोषाध्यक्ष दाहालले टानको नेतृत्व र बहुमत सदस्य कोषको रकम अपचलन गर्न लागि परेको र विधि प्रक्रियामा संस्था चल्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । यसै विषयमा टान भित्रको विवाद, विवादको कारण, समाधानको उपायका विषयमा कमल रानाले कोषाध्यक्ष लिलाबल्लभ दाहालसँग गरेको कुराकानी ।
० टान भित्रको विवाद के हो ?
– अघिल्लो साधारणसभामा प्रस्तुत नै नभएको विधान संशोधनको विषयमा साधारण सभामा प्रस्तुत गरेको भनेर टानको खातामा भएको हस्ताक्षरमा संशोधन गर्नुभएको छ । कोषाध्यक्षको अधिकार कटौती गरेर उहाँहरुले सहकोषाध्यक्षको हस्ताक्षरबाट बैंक एकाउन्ट चलाउने काम थाल्नुभयो । सँगै सनराइज बैंकमा खाता खोलेर फरक काम गर्न थाल्नुभएकाले आन्तरिक रुपमा भएको विवाद अहिले सार्वजनिक भएको हो ।
मुख्य विवादको विषय नै आर्थिक स्रोत हो । टानमा तीन किसिमको फन्ट अर्थात कोष छ । एउटा सदस्यहरुको कोष, अर्को प्रोजेक्टको कोष र अर्कोचाँही ‘टिम्सको कार्ड’ इगमपुरबाट टानले ल्याएर बेच्छ त्यसलाई हामी टिम्स फन्ट भन्छौं । यसरी तीनवटा फन्ट भएको संस्थामा दुईवटा फन्टमा कुनै विवाद छैन ।
तर, टिम्स फन्टमा रहेको रकम मध्ये पर्यटन बोर्डबाट ल्याइएको एक करोड २५ लाख रुपैयाँ पैसा थियो । त्यो रकम भनेको टिम्सपट्टिको डिपार्टमेन्टबाट खर्च गर्न पाउने रकम हो । टिम्सको टोलीले यो रकम घरभाडा तलबभत्तालगायतमा खर्च गर्छ । यो रकम अर्को खातामा रकमान्तरण गरौं भनेर अध्यक्ष ज्यूले भनिराख्नुभएको थियो । तर, विगतका दुई कार्यकालमा पनि टिम्स डिपार्टमेन्टमा भएको आर्थिक अपचलनका कारण विवाद आएकाले मैले नै यस रकमलाई रकमान्तरण नगरौं घरभाडा तलबभत्ता लगायतको कामका लागि यो पैसा चाहिन्छ भन्ने नै हाम्रो भनाई थियो ।
तर, उहाँहरुले यो रकमलाई कसरी रकमान्तरण गर्ने र अब टुरिजम बोर्डले टानको टिम्स डिर्पाटलाई करिब साढे चार करोड रुपैयाँ बजेट दिनेवाल छ । त्यो रकम पनि दुरुपयोग गर्ने नियतका साथ सहकोषाध्यक्षलाई बढी परिचालन गर्नेगरी साधारणसभामा हुँदै नभएको कुरा उल्लेख गरेर कोषाध्यक्षको अधिकार कटौती गर्ने काम गर्नुभयो यही कामले टान भित्रको विवाद बाहिर आएको हो ।
० नियमित कामकाजका लागि छुट्याइएको बजेटका लागि पनि रकम निकासा गराउन मान्नुभएन भन्ने आरोप छ तपाईंलाई ?
–हैन । त्यस्तो केही छैन । उहाँहरुले आरोपका लागि लगाइएको आरोप मात्र हो । अघिल्लो कार्यसमितिले करिब चार करोडभन्दा बढी रकम प्रोजेक्ट एकाउन्टमा छोडेको थियो । एक करोड ६२ लाख रुपैयाँ त अघिल्लो कार्यसमितिले काम गर्न नसकेर फिर्ता गर्नुपर्‍यो । मेरो भनाईंको अर्थ केहो भने उहाँहरुको काम गर्ने शैली सही छैन् र उहाँहरुको मनको कुन्ठालाई विभिन्न माध्यमबाट अहिले व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो गलत हो । उहाँहरु आर्थिक रुपमा पारदर्शी हुनुहुन्छ र भएको रकमको अपचलन गर्ने सोच भएको हुँदा यस्तो भएको हो ।
यसअघि मिडियालाई दिने पैसाको विषयमा पनि विवाद भएको हो । मैले एउटा मापदण्ड बनाऔं, नीति बनाएपछि खर्च गर्न सजिलो हुन्छ भनेर मैले भनेको हो । मैले काम गर्न थालेपछि त्यो धेरै कम भएको छ । तपाईंलाई भनौं पहिले मिडियाले विज्ञापन बजाए बापत आफू निकटको छ भने एक डेढलाख रुपैयाँसम्म पाउने र निकटको नभएमा पाँच हजारमा टाने गरिएको पनि थियो । त्यो विवाद मिलाउन मेरै संयोजनमा एउटा समिति बनाएर कुन डिपार्टको काम हो कसरी गर्ने भनेर मिलाएका थियौं । हामीले पर्यटन क्षेत्रको समाचार प्रकाशन गरेबापत टानको काम गरेबापत वर्षको २० हजारदेखि ५० हजारसम्म दिने भन्ने निर्देशिका बनाएपछि विवाद मिलेको थियो ।
अहिलेपनि हेर्नुहोस १४ लाख भन्दा बढीको रकममा मैले चेकमा हस्ताक्षर गरिसकेको छु तर, टानको एकाउन्टमा पैसा छैन । अव नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि सदस्यबापतको पैसा आउने भएकाले त्यो कभर होला । अरु पनि स्रोतका पैसा आएपछि त्यो पेमेन्ट हुन्छ ।
उहाँहरुले खातामा रहेको ३७ लाखमध्ये ३० लाख पनि अपचलन गर्ने र पर्यटनबोर्डबाट आउने चार करोड पनि अपचलन गर्ने, विभिन्न शीर्षकका प्रोजेक्टहरु बनाएर खर्च गर्ने भनेर उहाँहरु लाग्नुभएको छ । त्यसैको उदाहरणको हस्ताक्षर परिवर्तन पनि । तर, म त्यसो हुन दिन्न । म दुईतीन दिन भित्रैमा यो कुरा साधारणसभाबाट पास भएको हैन भन्दै जिल्ला प्रशासनमा जान्छु । त्यहाँ पनि भएन भने अदालत र अख्तियार धाउनुपर्ला भनेर त्यसको तयारीमा म लागेको छु ।
हैन भने उहाँहरुले टिम्स भित्रको रकम त्यही प्रयोजनका लागि खर्च गर्ने जस्तोः मजदुरहरुको ज्यान गएको त्यसको क्षतिपूर्तिबापत दिने, घाइतेभएकाको उपचार गर्ने गरी काम गरियो भने म सहयोगी भएर अघि बढ्न तयार छु । तर, विदेश भ्रमणको खर्च भनेर, होटलमा खाएको बीलको पैसा भनेर उहाँहरु आउनुभयो भने मैले भन्ने गरेको विधि र प्रक्रियाको कुरा छ । त्यो विधि, प्रक्रिया र नीतिभन्दा बाहिर गएर म कामै गर्दिन । तपाईंको मिडियामार्फत म यही जानकारी गराउँछु । संस्थामा रहेको पैसा सबैले मिलेर मिलाएर खान्छन भन्ने बाहिर सुनिन्छ म त्यसलाई रोकेर अझै पनि केही मान्छे इमान्दार छन् । उनीहरुले संस्थाको हितमा काम गर्छन भन्ने उदाहरण टानको कोषाध्यक्षको हैसियतले म दिन्छु ।
० तपाईंको कुरा सुन्दा टानमा पनि राजनीति हाबि भयो भन्दा हुन्छ ?
– त्यो कुरा नितान्त हैन् । हामीले नै पहल गरेर काम गरेका छौं । जीवनबहादुर शाही पर्यटन मन्त्री हुँदा हामीले नेपालको पर्यटन प्रबद्र्धनका लागि बीबीसी, सीएनएनसँग पनि गएर विज्ञापन गरेका छौं । टानले कामै नगरेको भन्न मिल्दैन । हामीले काम गरेका छौं । भुइचालोपछि हामीले लाङटाङ म्याराथुन जस्तो निक्कै कठिन काम गर्‍यौ । लाङटाङमा पर्यटन अझै जीवित छ भनेर हामीले देखायौं ।
तर, उहाँहरुको इन्टेन्सन नै व्यवसायीहरुको मुद्धा के हो भनेर पहिचान नै नगरी काम गर्दा व्यवसायीलाई समस्या हुन्छ भन्ने हो । तिब्बत र भुटानसँग भएको पर्यटकीय साझेदारीमा सरकारले लिने करले समस्या पारिरहेको छ । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा कर नलाग्ने तर, व्यवसायीले त्यसैगरी विदेशी रकम भित्र्याउन खोज्दा कर लगाएर ढाड सेक्ने, रकमान्तर गरेर पैसा ट्रान्सफर गर्दा पनि १३ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ यस्तो कामले व्यवसाय अनि पर्यटक कसरी फस्टाउँछ । यसमा बोल्ने कसले यो कसको काम हो । यता तिर ध्यान दिनुपर्छ भनेको हो । यो काममा अहिलेको टीमले र अध्यक्षले लिडरसीप गर्न नसकेको भन्नेमा म अडिग छु ।
० तपाईंहरुको कार्यसमिति चयनदेखि अहिलेसम्म विवाद जारी छ । एउटै टीममा भएका तपाईंहरुबीचको वैमश्यता यति लामो समयसम्म रहेपछि संस्था कसरी चल्छ ?
– व्यवसायीको मुद्दामा अघि बढ्नुपर्ने अवस्थामा दुई वर्षमा गरेको एउटामात्र काम हो अघि मैले भनेको लाङटाङ म्याराथुन । त्यो पनि म आफैं सहसंयोजक भएर गरेको, अरु उहाँहरुले व्यवसायीका मुद्दामा हिँड्नुभन्दा पनि मिटिङ सेमिनारमा कुद्ने, फन्ट पैसा कहाँबाट आउँछ र पैसा कसरी अपचलन गर्न मिल्छ भन्ने हिसाबले काम गर्दा बढी विवाद देखिन्छ । अरुबेला त्यस्तो किसिमको विवाद छैन । र, विधिमा भए अनुसार टिम्सकोषमा रहेको पैसा त्यही क्षेत्रको काम गर्नका लागि छुट्याइएको बजेटमा मैले अहिलेसम्म कुनै अवरोध गरेको छैन ।
अवरोध गरेको भए एक करोड ३७ लाख रुपैयाँ मध्ये किन ३७ लाख रुपैयाँमात्र खातामा रहन्थ्यो । टानको डेढ करोड रकममध्ये अहिले खातामा एक लाख रुपैयाँ पनि पैसा छैन । यदी मैले खर्च नै गर्नुहुँदैन भनेर नगरेको भए खातामा सबै पैसा हुन्थ्यो होला । मैले यत्तिमात्र भनेको हो विधि र प्रक्रिया बाहिर गएर कुनै पनि काम गर्नु हुँदैन । प्रक्रियाबाहिरको काम गर्दा राम्रो हुँदैन भन्ने मात्र हो । टिम्स कोषमा रहेको रकम रकमान्तरण गर्न र अपचलन गर्न दिएन भन्न लाज हुने भएकाले मात्र विवाद छ भनेर बाहिर भनने गरिएको हो । अरु केही विवाद छैन ।
म विश्वस्त छु विधि प्रक्रियाबाट म कहिँ बाहिर गएको भए कानुनी प्रक्रिया अनुसार कारबाही भोग्न तयार छु । उहाँले बहुमतका नामले जे सुकै गर्न पाउनुहुन्न । विधानमा भएको कुराभन्दा बाहिर गएर म काम गर्दिन । अहिले उहाँहरुले निकालेको यो हतकण्डा अरु कुनै रकमको अपचलनका लागि हो । यदी मेरो हस्ताक्षर बिना पनि कुनै रकम जथाभावी खर्च भएछ भने म प्रशासनमा जान्छु अनि पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराउन तपाईंहरलाई नै खबर गर्छु ।
० टानमा कामको भन्दा विवादको चर्चा बढी छ । बसेर विवाद मिलाउनुको सट्टा किन बजार हल्ला मच्चाउनुभएको हो ?
– त्यो भन्दा पनि बीचमा एउटा टीमले वार्ता मिलाएपछि धेरै समाधान भएको थियो । जबसम्म विधिमा संस्था चल्यो कुनै हल्ला बाहिर आएन । उहाँहरु विधिलाई नाघेर जथाभावी गर्न थालेपछि विवाद सुरु भएको हो । मेरो घर एक नम्बर प्रदेश भएकाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी हुन घर गएका बेला उहाँहरुले झ्यालको बाटो गरेर विधान संशोधनको काम गर्नुभयो । सबैले छलफल गरेरअघि बढ्नुपर्ने विषय अरुलाई नटेरी आफैंमात्र काम गर्न थालेपछि बाध्य भएर यो विषय बाहिर ल्याउनुपरेको हो ।
टिम्सको रकम अपचलन गर्नेगरी उहाँहरुले काम नगर्नुभएको भए यसपटकको विवाद बाहिर आउने थिएन । त्यो कुरा उहाँहरुले अस्वीकार गर्दा पनि टिम्स कोषमा रहेको ३० लाख रुपैयाँ रकम टानमा ट्रान्सफर गर्न कहिले अध्यक्षले कहिले कार्यसमितिले कहिले बहुमतका नामबाट दबाब दिनृ काम भयो । त्यो प्रेसर थेग्न नसकेर यो विवाद बाहिर ल्याएको हो । अरु सबै काम मैले गरेको छु । अपचलन हुन्छ भन्ने लागेर टिम्स कोषको पैसा रकमान्तरण नगर्दा यति धेरै प्रेसर आएपछि मैले प्रमाणसहित बाहिर आएको हुँ । यस्तो क्रियाकलाप बाहिर ल्याउँदा तपाईंहरुले बजार हल्ला मच्चायो भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि मलाई मान्य छ ।
० विवादको समाधान चाँही अब कसरी होला ?
– कटौती गरेको कोषाध्यक्षको अधिकार पहिलाजस्तै कायम गर्नुभयो भने समाधानको एउटा पाटो हुन्छ । अर्को टिम्स कोषको पैसा त्यही कोषको मापदण्ड भित्रमात्रै खर्चगर्ने गरी काम भयो भने समाधान हुन्छ । मलाई जस्तै उहाँहरुलाई पनि यो समस्याको समाधान तपाईंहरु विधिमा बस्नुभयो भने हुन्छ रे भनेर सोध्नुहोला ।